Ikhaya Lendlwana Yezwe Elithulile Nehlanzekile - Ilungele Izilwane Ezifuywayo - I-Airbnb
Ikhaya Lendlwana Yezwe Elithulile Nehlanzekile - Ilungele Izilwane Ezifuywayo
Billings, Missouri, i-United States
I-i-guesthouse ephelele ibungazwe ngu-Charisa
U-Charisa Ungumbungazi ovelele
Ukuhlelwa kwezwe elinokuthula kodwa ukushayela okulula kwemizuzu engama-30 ukuya enkabeni ye-Springfield, futhi cishe ihora ukusuka ezindaweni ezikhangayo zaseBranson. Indlu yethu yezivakashi yakhiwa ngo-2013, inefenisha ephelele futhi ihlezi endaweni engamahektha amathathu, egcwele izihlahla zezithelo, ingadi, kanye negceke elikhulu elibiyelwe ngokuphelele. Silwela ukunikeza indawo ethule, ehlanzekile, nenethezekile ukuze siphumule.
***Izilwane ezifuywayo zivunyelwe kodwa kufanele zibe nemvume yangaphambili ngaphambi kokubhukha. Kunemikhawulo ephathelene neminyaka, usayizi, kanye nohlobo, ngakho-ke sicela ufake le mininingwane esicelweni sokubhukha.
Azikho nhlobo izilwane ezifuywayo ezivunyelwe ifenisha, kuhlanganise nombhede. Imali yokulimala izohlolwa, uma le mithetho ingalandelwa.
Izilwane ezifuywayo kuzodingeka zilandwe ngemva kwalokho, okuhlanganisa imfucuza yangaphandle nezinwele zangaphakathi, njll. Uma okuthile kungcolile noma konakaliswe isilwane esifuywayo, sicela usazise ngaphambi kokuphuma. Sicela ungasebenzisi noma yimaphi amalineni noma amathawula anikeziwe ukuze uhlanze noma yikuphi ukungcola noma izingozi. Kunezindwangu ezincane ze-microfiber egumbini lokuwashela izinjongo zokuhlanza.
Sidinga futhi ukuthi izilwane ezifuywayo zigcinwe endlini noma nini lapho zishiywe zodwa ekhaya. Igceke elingemuva libiyelwe ngokuphelele, nokho, izilwane ezifuywayo zidinga ukugadwa ngenkathi zisegcekeni futhi noma iyiphi imfucuza iqoqwe futhi ilahlwe.***
Indlu yezivakashi cishe. 850 sq. izinyawo, enekamelo lokulala elingu-1 (umbhede wosayizi wendlovukazi) kanye negumbi lokugezela elingu-1. Kukhona indawo yokuphumula enamasofa amabili (angewona awokudonsa), indawo yokudlela kanye nekhishi. Ukuze uthole izihambeli ezengeziwe, umbhede we-aero ongusayizi wendlovukazi uyatholakala futhi ngesicelo, ngaphambi kokuhlala kwakho.
Ngenkathi indlu yezihambi *ingakwazi* ukuhlalisa abantu abahlanu, cishe ngeke ibe intofontofo ngabantu abadala abahlanu. Le mali yesibonelelo sezivakashi ezinhlanu ngokuvamile eyemindeni enezingane ezintathu ezincane.
Into nje okufanele icatshangelwe lapho ubhukha.
Ikhishi likuhlomele ngokugcwele ukuhlangabezana nezidingo ezijwayelekile zokupheka.
Igumbi lokuhlala linesikrini esikhulu se-HDTV esinesevisi ye-YouTube TV, i-Disney+, i-HBO Max, ne-Netflix; kukhona nesidlali se-Blu-ray Disc kanye noxhaxha lwama-DVD.
Ikamelo lokulala lingakwazi ukuhlala isikhathi eside nge-dresser enkulu kanye nekhabethe.
I-HDTV engu-45" ene- I-Roku, Disney+, I-Chromecast, I-HBO Max, I-Netflix, ikhebula ye-premium
4.90 · 103 okushiwo abanye
Ukubuka kwezwe okuhle, ngaphandle kwemingcele yedolobha. Kuyisilungiselelo esinokuthula kakhulu, esihle kakhulu uma ufuna ukuthula nokuzolile. Kukhona ukubukwa okuhle kwamadlelo agelezayo nemvelo.
I love creating, anything from art and jewelry design to interior decorating (which I hope you will be able to see in our guest house). I run my own handcrafted business out of the home, while my other half is a product design engineer for a company in Springfield. We are dedicated to creating the best accommodations for our guests.
I love creating, anything from art and jewelry design to interior decorating (which I hope you will be able to see in our guest house). I run my own handcrafted business out of the…
Othile kufanele abe seduze, endlini enkulu, phakathi namahora amaningi. Uma kwenzeka kuvela noma yiziphi izidingo noma usizo, singakujabulela ukusiza kodwa sicela uthumele umlayezo, uthumele umbhalo, noma ushayele kuqala. Sithanda ukuhlonipha ubumfihlo bezivakashi futhi siyakucela lokho njengembuyiselo.
Othile kufanele abe seduze, endlini enkulu, phakathi namahora amaningi. Uma kwenzeka kuvela noma yiziphi izidingo noma usizo, singakujabulela ukusiza kodwa sicela uthumele umlayezo…
UCharisa Ungumbungazi ovelele